Dekadaha Soomaaliya Oo Noqday Dahab Ay Ku Loolamayaan Dalal Badan Caalamka Ahi – somalilandtoday.com
Dekadaha Soomaaliya Oo Noqday Dahab Ay Ku Loolamayaan Dalal Badan Caalamka Ahi
(SLT-Muqdisho)-Waxa isa soo taraya tirada dalalka danaynaya in ay maamulaan dekada Soomaaliya, taas oo mararka qaar horseeday xasarad dublamaasiyadeed maadaama dalalka ka mid ah kuwa dekadaha raba aad isugu dhacsan yihiin.
Dalkii ugu dambeeyay ee soo bandhigay damaca ay uu ka qabo dekedaha waa Qatar, kaas oo wafti heer sare ah oo wasaaradda dekadaha ka socday usoo diray Soomaaliya, kuwaas oo kulamo la qaatay Ra’isulwasaare Xassan Cali Kheyre. Sida lagu faafiyay warbaahinta dowladda, socdaalka waftiga ayaa ahaa mid kormeer ah kadib heshiisyo ay hore u wada galeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowladda Qatar mar uu madaxweynahu tegay magaallada Dooxa.
Ra’isulwasaare Kheyre oo waftiga la hadlay ayaa laga soo xigtay in uu sheegay in ay Soomaaliya u furan tahay cid kasta oo doonaysa in ay maalgashi ku samayso dekadaha Soomaaliya.
Dalalka Kale ee dekada danaynaya
Illaa iyo hadda waxaa heshiisyo dhaqangalay iyo kuwa aanan wali dhaqangalin lala galay illaa 3 dhinac oo isugu jira shirkado iyo dowladdo. Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, Al Beyraak, ayaa muddo sanooyin ah maamulaysa dekada weyn ee Muqdisho, taas oo ah tan ugu weyn Soomaaliya.
Sababta ugu weyn ee dalalkani ay ugu kala loolamayaan dekadaha Soomaaliya ayaa ah meesha ay adduunka kaga taalo, taas oo ah meel muhiim ah, islamarkaasna uu maro ganacsiga adduunka intiisa badan.
Hase yeeshee dalalka qaar sida Itoobiya oo aan lahayn bad, waxa ay dekada Soomaaliya u qabtaa baahi rasmi ah, waxayna rabtaa in ay kala soo dagaan badeecooyinka tirad badan ee dibedda uga yimaadda ama waxyaabaha ay dhoofiso. Waxaase dad badan walwal ku haya danaha is diinin ee dalalkan ay leeyihiin ama xidhiidhka xun ee ka wada dhaxeeya, sida Qatar iyo Imaaraatka oo kale.
Waxaa la’isweeydiinayaa illaa heerka arrimahan ay saamayn ku yeelan karaan danaha Soomaaliya